Invest in Klaviyo's Ecommerce Marketing Automation Nhasi Pamberi PeZororo Rekutenga Mwaka | Martech Zone
Chengetedza mari muKlaviyo's Ecommerce Marketing Automation Nhasi Pamberi PeZororo Rekutenga Mwaka
Chitatu, October 14, 2020 Chitatu, October 14, 2020 Douglas Karr
Pamusoro pegore rapfuura, ini ndakafungidzira zvekushambadzira mabasa ecommerce mutengi kuti akure kutengesa kwavo. Ndakagadzirisa zvese zvecommerce saiti - mune iyi kesi, Shopify. Ndakagadzirisa matemplate, ndakabatanidza chirongwa chemubairo, ndakawedzera kuendesa kwenzvimbo, ndakatora zvigadzirwa zvemifananidzo mitsva, mapeji emichero akawedzeredzwa… uye ndikawedzera huwandu hwavo hwekutendeuka manhamba maviri.
Kana ndangokwanisa kuona kuti saiti iri kushanda nemazvo uye mashandiro ekuendesa anoshanda, ini ndaida kushanda pakuwedzera mari yese. Kuita yekushambadzira otomatiki mhinduro yakatumira tsamba kana kutumira mameseji vatengi uye kuvakurudzira kuti vapedze kutenga kana kuvanyengedza kuti vatange odha nyowani zvaive zvakakosha.
Nehurombo, zvishandiso zveShopify zviri kushomeka pano. Shopify ane kugona kugadzirisa kumwe kwekutenga ngoro yekusiya uye mamwe maemail - asi hapana chaiko huchenjeri kana kuzivisa zvine simba zvakavakomberedza. Semuenzaniso, ini ndakanga ndisina nzira yekukamura uye kutumira zvinopihwa zvichibva pane nhoroondo yekutenga kana zvimwe zvevatengi hunhu.
Klaviyo Ecommerce Kushambadzira Mashandisiro
Mushure mekuita imwe ongororo pamhepo, ndakafunga kuyedza Klaviyo. Mukati meawa, ini ndakachinja yavo yakajairwa kushambadzira otomatiki kuyerera kuti vagamuchire vatengi vatsva, mabhurawuza akasiiwa asina kuwedzera zvinhu kungoro, akasiya vatengi vengoro yekutengera, winback yevatengi, uye cross-sell / upsell automation yakagadzirirwa uye kutumira.
Klaviyo kusangana pamwe ne Shopify inoshamisa. Yakakwanisa kubatanidza kuShopify uye kugaya rese data revatengi, uye nekukasira kuitisa kuwanda kwakakwenenzverwa. Mumwedzi wekutanga, kutaurirana kwandakagadzira nekuvaka ndichishandisa dhonza & kudonhedza mhariri yeemail (Shopify haina imwe) yakawana dzoka mukudyara kwe2286% yemutengo weiyo system. Kwete… Handisi kutamba ikoko.
Kubatanidzwa kwaKlaviyo neShopify kunotibvumidza kuti tifambe mushe uye nenzira kwayo kuita yedu yekushambadzira yedhijitari kungave kuita kwetsika nevatengi vanogara vachitenga, chizvarwa chinotungamira kana otomatiki kuyerera.
Mike, Bobo Brand Brand
NaKlaviyo uye Shopify, unogona kutanga kutumira zvimwe zvega, zviri nani-zvakanangwa kutaurirana mune imwe nyaya yemasekondi. Klaviyo anounganidza uye anochengeta zvese zvine chekuita nezve vatengi vako kuti ugone kuishandisa kuendesa zviitiko zvisingakanganwike, kutyaira zvimwe kutengesa, uye kugadzira hukama hwakasimba.
Klaviyo's Shopify Ecommerce Kubatanidzwa Inosanganisira
Dashboard - Beyond marketing automation, Klaviyo inopa yakasimba e-commerce dhibhodhi iyo inogadziriswa zvizere uye inopa zvese zvese zvechitoro chako cheShopify mune chaiyo-nguva.
Kushanda Kwekushambadzira Kuyerera - Trigger inoyerera zvinoenderana nemazuva, zviitiko, rondedzero yemitezo, kana chikamu chechikamu uye shandisa zvakapatsanurwa, mafirita, bvunzo dzeA / B, uye zvimwe kunongedza nekugadzirisa. Tanga nekukurumidza neraibhurari ye Shopify-yakatarwa otomatiki uye emaema matemplate.
Kudzokera kuStock Alerts - Kunze kwezvitoro zvigadzirwa hazvichisiri kutengeswa kwekutengesa. Rega vatengi vanyore kune yambiro kana zvinhu zvadzoka mudura - zviri nyore kudaro.
Yakasarudzika Chigadzirwa Kurudziro - Nyore-kushandisa, zero-setup chigadzirwa kurudziro zvichibva pakutenga kwevatengi, uye nhoroondo yekutenga.
mishandirapamwe - Haufanire kungotumira kushambadza otomatiki kuyerera, unogona kutumira email kana meseji mushandirapamwe pese paungade chero chikamu chaungade.
Kuongorora A / B - Kwayedza email zvinyorwa zvemusoro uye zvemukati zvirinyore mukati mekutengesa otomatiki kufambiswa kwebasa.
Chikamu Chekutengesa - Tsanangura zvikamu zvisina ganhuriro. Shandisa chero musanganiswa wezviitiko, chimiro chimiro, nzvimbo, zvakafanotaurwa kukosha, uye nezvimwe… pamusoro penguva ipi neipi yenguva.
Dynamic Coupons - Nyore tumira maponi akasiyana kune ako vatengi.
Zvaunoda Mapeji - Brand uye gadzirisa yako inopindura email uye nharembozha vatengi mapeji.
chakagadzirwa Intelligence - Zvazvinogadzira -zvazvinogadzira zvega zvehupenyu kukosha, njodzi churn, jenda, yakakwana nguva yekutumira, uye kunze kwebhokisi zvakagadzirirwa chigadzirwa zvigadzirwa.
Ecommerce Hupenyu Kushambadzira Kushambadzira - Endesa zvakanangwa, zvine mafomu ekuvaka yako yekushambadzira runyorwa. Wobva wabata vatengi kuburikidza nenzira dzakawanda uye shandisa fungidziro kutarisira churn kana kunongedza yakakwira-kukosha vatengi.
Chigadzirwa data kuvandudza - Gadziridza otomatiki hunhu hwechigadzirwa ku Checkout, odha zviitiko, uye zvinyorwa zvinyorwa.
SMS - Revera chikamu chine simba cheKlaviyo uye otomatiki kugadzirisa wega meseji. Kugadzirisa mvumo kuri nyore uye kunoitwa otomatiki kuverengera mameseji anotumirwa kune vanhu chaivo.
Tanga neKlaviyo Mahara!
Klaviyo's Imwe-tinya Ecommerce Kubatanidzwa
Klaviyo ine anopfuura makumi manomwe akavakwa kare, kubaya-kubatanidza pamwe chete nemaAPIs akavhurika kuona kuti iwe unogona kuwana nyore nyore bhizinesi rako 'data muKlaviyo pasina kunetsa. Zvigadzirwa ecommerce kusangana zviripo kuti iwe umuke uye umhanye nekukurumidza uchishandisa:
Shopify uye ShopifyPlus
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mune ino chinyorwa.
Tags: otomatiki inoyererabrowse kusiiwaCLVmutengi hupenyu hwakawandaecommerce aiecommerce kushandisa michinaecommerce kuyambuka-kutengesa emailecommerce dashboardecommerce email macampaignecommerce chidimbuecommerce inogamuchira emailemail ab kuyedzaKlaviyoMagentokufungidzira kutengashopify ab kuyedzashopu makuponishopify kushambadzira otomatikishopifyplussms yekushambadzira otomatikistock chenjedzowoocommerce